သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ . . . | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← Approaching Nirvana (4)
Approaching Nirvana (5) →
သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ ပြောစရာ ထူးခြားသော အချက်အလက်များရှိသည်။
သူ၏ ကျော်ကြားသော အဆိုအမိန့်တစ်ခုမှာ “God Does Not Play Dice” ဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်။ ဤစာကြောင်းကို သူသည် သူ၏ မိတ်ဆွေ နိုဗယ်လ်ဆုရ မက်စ်ဘွန်းထံရေးသောအခါ ထည့်သွင်း ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ယင်းအဆိုသည် “E=mc2” ၏နောက်၌လိုက်၍ထင်ပေါ် ကျော်ဇောခဲ့သည်။
သူ၏ အမြင်မှာ “စကြ၀ဠာသည် ပရမ်းပတာ ဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်” ဟူသော အမြင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သူ့အား စာရေးဆရာ တစ်ရာကျော်က ကန့်ကွက်ကြောင်း ရေးသားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအခါသူသည် “Why one hundred? If I were wrong, one would have been enough” ဟုတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
အိုင်းစတိုင်းသည် နိုင်ငံရေးကို အထိုက်အလျောက် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်း၌ အောက်ပါစကားဖြင့် သူသည် နိုင်ငံရေးကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ “Politics is for the moment, but an equation is for eternity.” ဟူ၍ဖော်ပြခဲ့သည်။
သူ၏ equation ဖြစ်သော “E=mc2” သည် စကြ၀ဠာတည်ရှိသ၍ တည်နေလိမ့်မည် ဖြစ်သည် ဟု အများသူငှာ ယူဆကြပါသည်။
တစ်ဖက်မှာလည်း “Equations are more important to me because politics is for the present, but an equation is something for eternity.” ဟု ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
Tags: GOD, Myanmar Posts, Science, စကြာဝဠာ, သိပ္ပံ, အိုင်းစတိုင်း
This entry was posted in Buddhism and tagged GOD, Myanmar Posts, Science, စကြာဝဠာ, သိပ္ပံ, အိုင်းစတိုင်း. Bookmark the permalink.